"Iyagu Waa Sida Mishiin Oo Kale" - Kylian Mbappe Oo Amaan Kala Dul Dhacay Liverpool & Wararkii La Xidhiidhinayay Oo Xoogaystay. - Gool24.Net
Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ayaa si weyn u amaanay kooxda hoggaanka u haysa horyaalka Premier League ee Liverpool xilli uu dabka kusii shiday wararkii la xidhiidhinayay inuu usoo wareegayo.
Heshiiska cusub ee dhinaca maaliyadaha ah ee ay Liverpool la gaadhay shirkada Nike ayaa dhaliyay in kooxdaas lala xidhiidhiyo Mbappe iyadoo ay jamaahiirta kooxdaasi sameeyeen olole baraha bulshada ah oo la magac baxay #Mbappe2020.
Sida uu xilli ciyaareedkan dareemayo qofkasta oo kubadda cagta daawada, 21 sano jirkan ayaa la dhacsan qaab ciyaareedka Liverpool oo 21 kamid ah 22 kulan oo ay horyaalka kasoo ciyaartay soo guuleysatay 16 dhibcoodna hoggaanka ku haysa.
Kylian oo u warramayay BBC ayaa sheegay in Liverpool ay u muuqato sida Mishiin oo kale dadku marka ay daawadaana ay shaqadooda u arkayaan wax sahlan balse aysan ahayn mid sahlan.
“Waxa ay Liverpool samaynayso wakhtigani waa cajiib” Ayuu ugu horreynba Mbappe u sheegay il wareedka BBC.
“Iyagu waa sida Mashiin oo kale, Waxay yeesheen joogteyn waxaana ay u muuqdaan sida kuwo leh ‘Mar kale ayaynu ciyaaraynaa, Markale ayaynu ciyaaraynaa”.
“Iyagu hal kulana may guuldaraysan, Markaad daawanayso waxaad moodaysaa in waxkasta uu sahlan yahay laakiin taasi maaha mid fudud”.
“Iyagu waa kuwo diirada saaraya, Waxay ciyaaraan kulamo saddex maalmood oo kasta waana ay guuleystaan, Way guuleystaan oo ay guuleystaan”.